किन खेल्छन् दयाहाङ 'व्याक टु व्याक' फिल्म ? (भिडियो)
फिल्मीखबर, काठमाडौं, २०७३ मंसिर २६, आईतवार
अभिनेता दयाहाङ राई पछिल्लो समय सर्वाधिक व्यस्त रहने अभिनेतामा पर्छन् । पछिल्ला बर्ष २०७३ मा मात्रै उनका करिब दर्जन जस्तो फिल्म रिलिज हुँदैछन् । बर्षको आठौँ महिना चल्दैगर्दा अहिलेसम्म दयाहाङका पाँच फिल्म रिलिज भइसके ।
एउटै फ्रेममा अनुप र मलिना, ब्रेकअप र प्याचअपको हल्लाबारे खोले मुख (भिडियो)
फिल्मीखबर, काठमाडौं, २०७३ मंसिर २४, शुक्रवार
अभिनेता अनुपबिक्रम शाहि र अभिनेत्री तथा पुर्व मिस नेपाल मलिना जोशीको प्रेम प्रसंगले समय समयमा राम्रै चर्चा पाउँछ । कहिले ब्रेकअप त कहिले प्याचअप, गसिप बजारमा यी दुईको समाचार चर्चाको विषय बनिरहन्छ ।
सौगात मल्लसँग भयंकर रोमान्स गरेको बताउने को हुन् कमली ? (भिडियो)
फिल्मीखबर, काठमाडौं, २०७३ मंसिर २१, मंगलवार
सौगात मल्ल स्टारर फिल्म 'शब्द' रिलिजको संघारमा छ । आउँदो पौष २९ बाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्मको निर्माण टिम अहिले प्रचार प्रसारलाई तिब्र बनाउने क्रममा छ । यो फिल्ममा सौगातसँग अनस्कृन रोमान्स गरेकी छिन् अभिनेत्री कमली वाईवाले ।
'छड्के' देखि नम्रतासँग नजिक छुः सौगात मल्ल (भिडियो)
फिल्मीखबर, काठमाडौं, २०७३ मंसिर २०, सोमवार
अभिनेता सौगात मल्ल, शनिबार सम्पन्न कामना फिल्म अवार्डका उत्कृष्ट अभिनेता । बर्ष २०७२ को उत्कृष्ट अभिनेता घोषित हुँदा उनि कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन्, उनको अवार्ड अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले थापिन् ।
Results :6- 10 of 141